सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलिया प्रस्थान – Gandaki Voice
Home/खेलकुद/सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलिया प्रस्थान
सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलिया प्रस्थान
पोखरा, ३० मंसिर ।
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बिग बास लिग (बीबीएल) का लागि आज अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् । बीबीएल सुरु भइसक्दा काठमाडौंमा रहेका उनी मंगलबार बिहान ११ बजे अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका हुन् ।
अस्ट्रेलिया पुगेपछि उनी १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नेछन् । त्यसपछिको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा उनले खेल खेल्नेछन् ।
सन्दीप यो सिजनको बिग बास लिग होबर्ट हुरिक्यान्समा आवद्ध छन् । उनको टोलीले अहिलेसम्म खेलेका दुई खेलमा दुवै जित हात पारेको छ ।
सन्दीप केही समय अगाडि कोरोना संक्रमीत भएका थिए । तर, केही दिनको अस्पतालमा उपचार पछि उनी निको भइसकेका छन् । पिटर ह्यान्डस्कोम्बको कप्तानी गरेको हुरिक्यान्सले यो सिजनका लागि नेपालका युवा सेन्सेसन सन्दीपलाई टिममा आवद्ध गरेको हो ।
सन्दीपले यसअघिका दुई संस्करण मेलबर्न स्टारबाट खेलेका थिए । जसमा उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहँदै आएको थियो । दुई सिजनमा गरि २६ विकेट हात पारेका छन् ।
नोभेम्बरमा दुवईमा सम्पन्न इन्डियन प्रिमियर लिग ९आईपीएल० मा सन्दीप दिल्ली क्यापीटल्समा आवद्ध थिए । तर, दिल्लीले सन्दीपलाई मैदान उत्रने अवसर भने दिएन । दिल्ली गएको सिजनमा फाइनलसम्म पुग्न सफल भएको थियो । नेपाली क्रिकेट टीमका युवा स्टार लामिछाने आईसीसीको बरियतमा एक स्थान सुधार भएको छ । उनी अहिले बरियतको ८०औँ स्थानमा छन् ।
लियोनल मेस्सी यतिधेरै खुशी किन ?
धौलागिरी आइसफल पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन
चेल्सीका प्रशिक्षक लाम्पार्ड बर्खास्त, कारण के हो ?
पोखरामा राष्ट्रियस्तरको महिला भलिबल प्रतियोगिता हुने